मधुमेह र उच्च रक्तचापका बिरामीले कस्तो अवस्थामा आँखा जाँच गराउने? डा शाक्यसँग भिडियो वार्ता :: रिता लम्साल :: स्वास्थ्य खबरपत्रिका
मधुमेह र उच्च रक्तचापका बिरामीले कस्तो अवस्थामा आँखा जाँच गराउने? डा शाक्यसँग भिडियो वार्ता
रिता लम्साल शनिबार, कात्तिक १३, २०७८, ०६:१८:००
काठमाडौं– मधुमेह र उच्च रक्तचापका कारण मानिसहरुमा आँखाको समस्या बढ्दै गएको रेटिना (दृष्टि पर्दा) रोग विशेषज्ञ डा किरण शाक्यले बताएका छन्।
स्वास्थ्यखबरको कार्यक्रम स्वास्थ्य संवादमा कुराकानी गर्दै डा शाक्यले पछिल्लो समय नेपालमा मधुमेह र उच्च रक्तचापका बिरामी बढ्दै गएसँगै त्यसले आँखामा असर पारेका बिरामीहरु पनि बढ्दै गएको बताएका हुन्।
उनका अनुसार मधुमेहले शरीरको विभिन्न अंगहरुमा असर पार्छ । त्यो मध्ये एउटा असर आँखामा पनि पर्ने गर्छ। मधुमेहको असरले आँखाको दृष्टिपर्दा अर्थात रेटिनामा असर पुर्‍याउँछ। जसले गर्दा दृष्टि कमजोर हुने वा कालो धब्बा आएर अन्धोपनको समस्या समेत निम्तिन सक्छ।
मधुमेहको कारणले हुने न्युनदृष्टि तथा अन्धोपनको समस्याबाट बच्न मधुमेहका बिरामीले अनिवार्य रुपमा आँखा जाँच गराउनुपर्ने डा शाक्यको भनाइ छ।
उनका अनुसार मधुमेहको समस्या भएका बिरामीले हरेक वर्षमा एकपटक आँखा जाँच गराउनुपर्छ।
मधुमेहका बिरामीको शरीरमा रगतमा चिनीको मात्रा उच्च हुन्छ। आँखाको रेटिनामा हुने रगतका नसाहरुमा पनि परिवर्तन आउँदा रगतनलीहरु खुम्चिन थाल्छ। जसले गर्दा दृष्टि पर्दाका कोषहरु निसासिँदै जान्छ। जसले गर्दा रेटिनामा रगत आउने, बोसो जम्ने, रगत बगेर कालो धब्बा आउने, दृष्टि कमजोर हुँदै जाने जोखिम रहन्छ।
मधुमेहका बिरामीहरुको आँखामा असर देखिएमा समयमा उपचार नगर्दा विस्तारै आँखा कमजोर हुँदै दृष्टिविहिन नै हुने जोखिम रहने डा शाक्यले बताए।
मधुमेहको समस्या भएका व्यक्तिले किन आँखा जाँच गराउनुपर्छ? मधुमेहले आँखामा कस्तो असर पार्छ? मधुमेहको समस्या भएका व्यक्तिमा आँखामा कस्ता कस्ता रोग तथा समस्या देखिने सम्भावना रहन्छ? मधुमेह भएका बिरामीले समयमा आँखा परीक्षण नगर्दा कस्तो जोखिम बढ्छ? उनीहरु कस्तो अवस्थामा उपचारका लागि अस्पताल आइपुग्ने गरेका छन्? रेटिनामा रोग तथा समस्या हुने अन्य कारणहरु केके छन्? लगायतका विषयमा डा शाक्यसँग स्वास्थ्यखबरकी रिता लम्सालले भिडियो कुराकानी गरेकी छिन्।
प्रस्तुत छ डा शाक्यसँग गरिएको भिडियो वार्ता